Rotary Machines ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ - China Rotary Machines Factory
K2 တော်လှန်ရေး Tattoo ကျည်တောင့်စက်
ဂျာမန် coreless motor ၂၅x၂၂mm အလှည့်အမြန်နှုန်း - 12V 11000rpm torque: 420g အမြန်အသေးစိတ်အချက်အလက်များ: အမြဲတမ်းအမျိုးအစား: Tattoo သေနတ်ပစ္စည်း - Alluminum Gun အမျိုးအစား: လျှပ်စစ်ဇာစ်မြစ်: Zhejiang, China ကုန်အမှတ်တံဆိပ်: K2 Model နံပါတ်: MDJ-166 ကုန်ပစ္စည်းအမည်: K2 Revolution Cartridge Machine Interface: RCA Motor: Germany Coreless Motor 25x22mm အမြန်နှုန်း: 12V 11000rpm Adjustable Needle Length: 0.1-4mm Packing: 1pc / box အလေးချိန်: 0.6kg အရောင်: Pink, Black, Gold အားသာချက်: တည်ငြိမ်သောအသုံးပြုမှု: Tattoo နမူနာကျွန်ုပ်မှာယူသည်။ ...
KingKong3Tattoo ကျည်တောင့်စက်
ဂျာမန် coreless motor လည်ပတ်မှုမြန်နှုန်း - 12V 11000rpm 480 ကြီးမားသော torque AIR FREIGHT - အလတ်စားတင်ပို့မှု (၁၀၀ ကီလိုဂရမ်ကျော်) သို့မဟုတ်သင်၏ကုန်စည်သည်ပင်လယ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုမစောင့်နိုင်သည့်အခါ။ လေယာဉ်တင်သင်္ဘောနှုန်းသည်အလေးချိန်နှင့်ပမာဏပေါ်မူတည်သည်။ အမြှုပ်ကဲ့သို့သောအရာအချို့သည်နေရာတော်တော်များများယူသော်လည်းအလွန်ပေါ့ပါးပြီးသံကဲ့သို့သောအချို့ပစ္စည်းများသည်အလွန်လေးလံသော်လည်းနေရာအနည်းငယ်ယူသည်။ အမှန်တကယ်ကုန်တင်ကုန်ကျစရိတ်သည်အလေးချိန်နှင့်ပမာဏကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်အကူးအပြောင်းကာလသည်လုပ်အား ၁၀ ရက်ထက်မပိုပါ။
IPHISE Tattoo ကျည်တောင့်စက်
Coreless Motor Rotational Speed: 9000rpm Adjustable Needle Length:0- 3.5mm 1. Coreless Motor, 12/9000 ၏အမြန်နှုန်းသည်စက်၏တည်ငြိမ်မှုကိုထိရောက်စွာအာမခံသည်။ ခွန်အားသည်ပြင်းထန်သည်။ အကြား၌အဘယ်သူမျှမပူအလုပ်! ကိုယ်ထည်ကိုလေကြောင်းအလူမီနီယမ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ၎င်းသည်ကိုယ်ထည်၏ပြီးပြည့်စုံမှုနှင့်အရွယ်အစားတိကျမှုတို့ကိုသေချာစေရန်တိကျစွာဖော်ပြထားသော ၅ လုံး ၀ စီဒီစီဒီစက်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောစက်ဖြစ်သည်။ ၃။ ယာဉ်ကိုယ်ထည်၏မျက်နှာပြင်သည်မှန်မှုတ်ပြီး anodized ဖြစ်သည်။
Hattattattoo Rotary Machine (Coreless Motor)
အသားတင်အလေးချိန် - စက်တစ်လုံးတည်း: ၈၅ ဂရမ်စုစုပေါင်းအလေးချိန် - ၁၇၀ ဂရမ်အရွယ် - စက်တစ်ခု - ၅၀x ၅၂ x ၃၃ မီလီမီတာ (လှံတံအရှည် ၉၁ မီလီမီတာ) ။ ခရမ်းရောင် - အစိမ်းရောင် Configuration list: စက် * ၁ ပါးလွှာသောလှံတံ * အသေးစားဆက်စပ်ပစ္စည်းအထုပ် * ၁ ထပ်ထည့်နိုင်သည် - လက်ကိုင်နှင့်ဝါယာကြိုး Parameter များ - ၁။ ဆက်သွယ်မှု - RCA မျက်နှာပြင် ၂။ ပစ္စည်း - အလူမီနီယမ်အလွိုင်း ၃။ လုပ်ငန်းစဉ် - CNC ပေါင်းစပ်ထားသောတိကျစွာထွင်းထုခြင်း - ၄။ မော်တာ - Coreless မော်တာ 5. Starting ဗို့: 4-5v ...
Alien Tattoo ကျည်တောင့်စက် (Coreless Motor)
အသားတင်အလေးချိန် - စက်တစ်ခုတည်း - ၇၄ ဂရမ်လက်ကိုင် - ၁၇၀ ဂရမ် - စုစုပေါင်းအလေးချိန် - စက်တစ်ခု - ၁၇၀ ဂရမ် - လက်ကိုင် - ၂၈၈ ဂဂ - အရွယ်အစား - စက်တစ်လုံး - ၃၅ * ၆၃၀ (တိုင်လုံးအရှည်) မီလီမီတာနှင့်လက်ကိုင် - ၁၃၃ * ၃၅ မီလီမီတာလက်ကိုင်အရွယ်အစား - ၈၃.၈ * ၃၀.၅ မီလီမီတာ ထုပ်ပိုးခြင်း - အပေါ်နှင့်အောက်အဖုံးဘူးအရောင် - အရောင် ၆ ရောင် - အနက်ရောင် - နီ - ရွှေ - ခရမ်းရောင် - ငွေ - မီးခိုးရောင် - ရှမ်ပိန် Configuration list - စက် * ၁ ဂီယာလှံ * သုံးထပ်အပိုသုံးအထုပ် * ၁ လက်ကိုင် (ရွေးချယ်နိုင်) Parameters: Interface: RCA interface2။ ပစ္စည်း: လူမီနီယမ်အလွိုင်း 3. ယာဉ်: CNC ပေါင်းစပ်တိကျမှန်ကန်သောထွင်းထု4...
KingKong2Tattoo ကျည်တောင့်စက်
Motor: USA Coreless Motor အလှည့်အမြန်နှုန်း - 12000rpm Adjustable Needle Length: ၀.၁ မှ ၄ မီလီမီတာ DC အဆက်၊ ကြီးစွာသောစီးကူးမှု။ မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းနှင့်စွမ်းအားမြင့်၊ ၈ နာရီအလုပ်လုပ်ပြီးနောက်အပူမပေးပါ။ ဆူညံသံနည်းပါးပြီးတက်တူးထိုးအနုပညာရှင်များနှင့်ဖောက်သည်များအတွက်တိတ်ဆိတ်သောပတ်ဝန်းကျင်ကိုပေးသည်။ စျေးနှုန်းဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ သင်များများမှာလေလေသင်ရနိုင်သည့်စျေးနိမ့်လေလေဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် OEM / ODM ထုတ်ကုန်များအတွက်သင့်လျော်သည်။ ဖွံ့ဖြိုးမှုအားလုံး, ဒီဇိုင်းတစ်ခု ...
Great Quality 9V 12000rpm Tattoo Machine DC Interface ဂျာမနီ Faulhaber Motor Shell Tattoo Rotary Machine Description: စက်တွင်အလူမီနီယမ်အလွိုင်းထုတ်လုပ်ထားသောဘောင်ကွက်လပ်များရှိပြီး LED မီးအရင်းအမြစ်နှင့်အတူပြန်လည်လှုပ်ရှားနိုင်သည့်အခါဖြုတ်။ လဲလှယ်နိုင်သောဘေးထွက်ဘမ်ပါ။ ၎င်းစက်သည်ပျော့ပျောင်းသော၊ အလတ်စားနှင့်မာကျောသော push-up bar သုံးခုပါသည့်မူပိုင်ခွင့်အသစ်တီထွင်ထားသော torsion control device ကိုအသုံးပြုသည်။ အပိုဆောင်းအင်္ဂါရပ်များ non-polarity က sensitivity ကိုနှင့်အဘယ်သူမျှမစတင်နှောင့်နှေးပါဝင်သည်။ အဆိုပါစက်တစ် billet အယ်လ်ရှိပါတယ် ...